एनआरएन विवाद सहमतिमा सुल्झदै, कार्यदलहरु गठन – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१२ मंसिर २०७७, शुक्रबार ०२:४२ English
एनआरएन विवाद सहमतिमा सुल्झदै, कार्यदलहरु गठन
काठमाडौं, ४ पुस । गैरआवासीय नेपाली संघमा देखिएको विवाद सहमतिमा सुल्झने भएको छ । संघको आइतबार सम्पन्न सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष शेष घलेले विधानमा भएको अन्यौल अन्त्य गर्न बिधान कमिटीलाई दिने निर्णयलाई स्वीकारे पछि विवाद साम्य हुने संकेत देखापरेको हो । सचिवालय बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार विवाद भएका बिषयमा स्पष्ट पार्न बिधान कमिटीलाई दिने निर्णय भएको छ ।
आइतवारको सचिवालय बैठकमा संघभित्रको विवाद अब बस्ने अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा विवाद समस्या समाधानका लागि छुट्टै प्रस्ताव लैजाने निर्णय भएको छ ।
यसअघि संघको ५१ औं कार्यसमितिको बैठकले गरेका निर्णय बदर गर्न माग गर्दै निवार्चित २५ मध्ये १८ जना पदाधिकारीले अध्यक्ष घलेविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए । अध्यक्ष घलेले सो हस्ताक्षरलाई कुनै महत्व दिएका थिएनन् । पदाधिकारी बैठकले सो मुद्दालाई अगामी केन्द्रीय समितिको बैठकमा लैजाने प्रस्ताव गरेपछि संघको विवादले औपाचारिक रुपमा बैठकमा प्रवेश पाउने भएको हो । यसअघि घले निकट नेताहरुले संघभित्र कुनै विवाद नहरेको दावी गर्दै विवाद मिडियाले सिर्जना गरेको भन्दै मिडियाविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत् खनिएका थिए । आगामी बैठकमा प्रमुख संरक्षक जीवा लामिछाने प्रस्तुत गरेको मध्यमार्गी प्रस्तावका बिषयमा समेत छलफल हुने भएको छ । यसअघि लामिछानेले ५१ औं कार्यसमितिले गरेका निर्णय विधानअनुरुप भए नभएको व्याख्य गर्न संघको विधान समितिमा छलफल गर्न पठाउन सकिने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । सो प्रस्तावलाई समेत घले पक्षले महत्व दिएको थिएन ।
आइतबारको बैठकले गैरआवासीय नेपाली संघका कार्यदलहरुको संयोजक तोकेको छ । अध्यक्ष घलेले दुईवटा विभागको जिम्मेवारी आफैले राखेका छन् । वैदेशिक रोजगार सहायता कोष, एनआरएन भवन निर्माण कोषको जिम्मा लिएका छन । इन्टरप्रिन्युसिप एण्ड इन्टरप्राइजेज डेभलपमेन्टको जिम्मेवारी पूर्व महासचिब रतन झालाई दिएको छ ।
यूरोप संयोजक कुल आचार्यलाई व्यापार र लगानी प्रवद्र्धन जिम्मेवारी तोकिएको छ । ब्रान्डिङ एण्ड कम्युनिकेशनको जिम्मेवारी ऋषि केसीले दिइएको छ भने नेपाली पर्यटन प्रवद्र्धनको जिम्मेवारी उपाध्यक्ष भवन भट्टलाई तोकिएको छ । वैदेशिक रोजगार तथा आप्रवासी कामदार सहयोग कोषको जिम्मेवारी धर्म केसीले पाएका छन् । परोपकार र मानवीय सहायताको जिम्मेवारी अर्का उपाध्यक्ष कुमार पन्तलाई दिइएको छ ।
नीति तथा कार्यपद्धत्तिको जिम्मेवारी महासचिव डा. बद्री केसी, एनआरएनको वित्तीय विभागको जिम्मेवारी कोषाध्यक्ष हिक्मत थापा, सञ्चार र छापाको जिम्मेवारी प्रवक्ता रञ्जु थापा, विधान संशोधन सल्लाहकार समितिको जिम्मेवारी डा. हेमराज शर्मा, अनुशासन समितिमा डा. अम्बिका अधिकारी, नेपाली उत्पादनको वैदेशिक प्रवद्र्धनमा अर्जुन श्रेष्ठ, विधान समितिमा कुलचन्द्र गौतम, क्षमता अभिवृद्धिमा डा. राजु अधिकारी, नागरिकताको निरन्तरता विभागमा रामप्रताप थापा, प्रोलेप्स र महिला सशक्तिकरणमा सपिला राजभण्डार, खुला विश्वविद्यालयमा डा. प्रमोद ढकाल, पुस्ताकालयमा नरेश कोइराला, भाषा, साहित्य, संस्कृति र सम्पादन र प्रबर्द्धन पुष्प बरुवाल र युवा खेलकुद विभागको जिम्मा विजय पोखरेललाई दिइएको छ ।
४ माघ २०७२, सोमबार ०१:५९ मा प्रकाशित